Beeralayda qaadka Kenya oo ka cabanaya Dowladda Soomaaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Beeralayda qaadka Kenya oo ka cabanaya Dowladda Soomaaliya
Beeralayda qaadka Kenya oo ka cabanaya Dowladda Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa markii 2aad muddo bil gudaheed ah waxay hawada Soomaaliya ka celisay diyaarad siday jaad oo laga leeyahay Kenya, laguna eedeeyay iney ku soo xadgudubtay hawadeeda, iyada oo aan wax ruqsad ah ka haysan Soomaaliya.
Saraakiisha hawada u qaabilsan Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay Jimcihii celiyeen dayuurad jaad siday markiii danbena ay ka degtay dalka Jabbuuti, ka hor inta aysan ku noqon Kenya.
Wargayska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya ayaa isaga oo soo xiganaya guddoomiyaha urur ay ku mideysan yihiin ganacsatada jaadka ee Kenya, wuxuu sheegay in baaraleyda qaadka ay ka cabanayaan qasaare xooggan oo soo gaaray, iyada oo Diyaaradda la soo celiyey ay siday 11.3 tan oo jaad ah, ayna ku wajahneyd Puntland.
“Waxay sii martay hawada Jabuuti abaare 10-kii subaxnimo kaddib waxay u sii gudubtay hawada Itoobiya, wuxuu qorshuhu ahaa inay ku degto Puntland, waxaana lagu amray in dib ay ugu laabato Kenya, waana khaasaarihii ugu xoggaan abid muddo bil gudahood” Ayuu yiri Munjuri.
Soomaaliya ayaa haysata raadaaro caalami ah oo tilmaamaya dayuuradaha hawadeeda soo gala.
Previous articleWasiir Beele oo aan wali qarashaadkii loogu Deeqay Afgooye
Next articleKenyan Khat farmers complain about Somali government
Maraykanku oom doonaya inuu Hogaamiyaha Falastiin Cabbaas nin kale ku...